မက်ခရွန်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့ ရေငုပ်သင်္ဘောကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဥရောပတွင် အောက်တိုဘာလ၌ တွေ့ဆုံရန်ရှိ - Xinhua News Agency
ပဲရစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ သမ္မတ အီမန်နျူရယ် မက်ခရွန် (Emmanuel Macron) နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် (Joe Biden) တို့သည် ဩစတြေးလျ-ယူကေ-အမေရိကန် (AUKUS) သုံးနိုင်ငံ လုံခြုံရေးမိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက်က တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြပြီးနောက် ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည် အောက်တိုဘာလ၌ ဥရောပတွင် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံက “နောက်ကျောကိုဓားနဲ့ထိုးခြင်း” ဟု ဖော်ပြထားပြီး ဥရောပတစ်ခွင် ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်စေသည့် အောကပ်စ် (AUKUS) သဘောတူညီချက်သည် ဩစတြေးလျနိုင်ငံက အမေရိကန်နိုင်ငံထုတ် နျူကလီးယားသင်္ဘောများဖြင့် အစားထိုးလျက် ပြင်သစ်မှရေငုပ်သင်္ဘောများ ဝယ်ယူရေးစာချုပ်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းကြောင့် နျူကလီးယားတိုးပွားလာခြင်းအပေါ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်အား ဇူလိုင် ၂၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
နှစ်နိုင်ငံ သမ္မတတို့က “ဒီအခြေအနေက ပြင်သစ်နဲ့ အခြားဥရောပမိတ်ဖက်တွေရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက် အကျိုးစီးပွားဆက်စပ်နေတဲ့ မဟာမိတ်များအကြား ပွင့်လင်းသော ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ကို သဘောတူထားပါတယ်” ဟု ၎င်းတို့၏ ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အောကပ်စ် သဘောတူညီချက်အား စက်တင်ဘာ ၁၅ ရက်က ထုတ်ပြန်ချိန်မှစ၍ အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲကြောင့် ရက်စက်စွာပြုမူခံခဲ့ရသော ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဩစတြေးလျနှင့် အမေရိကန်တို့အား “လိမ်ညာခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုကို ကြီးမားစွာ ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် အထင်အမြင်သေးခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း ပြစ်တင်စွပ်စွဲခဲ့သလို နှစ်နိုင်ငံလုံးမှ ၎င်း၏သံအမတ်များကိုလည်း စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်က ပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့သည်။
မက်ခရွန်နှင့် ဘိုင်ဒန်တို့သည် “ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာ မျှဝေမှုရှိတဲ့နားလည်မှုတွေ ရရှိဖို့နဲ့ အရှိန်အဟုန်ကိုထိန်းထားဖို့” အောက်တိုဘာလကုန်တွင် ဥရောပ၌ တွေ့ဆုံလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။
လာမည့်သီတင်းပတ်တွင် ပြင်သစ်သံအမတ်အား ဝါရှင်တန်သို့ ပြန်လည်စေလွှတ်ရန် မက်ခရွန်က ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ဘိုင်ဒန်က “အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသမှာ ပြင်သစ်နဲ့ ဥရောပရဲ့ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်း မဟာဗျူဟာမြောက်အရေးပါမှုကို” ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မကြာသေးမီရက်များက ဥရောပခေါင်းဆောင်များသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ “လက်သင့်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသော” အပြုအမူအား ထိတ်လန့်ခဲ့ပြီး အောကပ်စ် သဘောတူညီချက်နှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများကို ပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသတွင် မဟာဗျူဟာမြောက်သဘောတူညီချက်အသစ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရာတွင် ပြင်သစ်နှင့် အခြားဥရောပမိတ်ဖက်များအပေါ် အဘယ်ကြောင့် လှည့်စားခဲ့သည်ကို ဘိုင်ဒန်ထံမှ ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
PARIS, Sept. 22 (Xinhua) — French President Emmanuel Macron and his U.S. counterpart Joe Biden said they will meet in October in Europe following their phone call on Wednesday over the new trilateral Australia-United Kingdom-United States (AUKUS) security partnership.
The AUKUS deal, which was described asa“stab in the back” by France and sparked outcry across Europe, has raised concerns over nuclear proliferation from the international community as under the deal Australia has scrappedacontract to buy submarines from France in favor of U.S.-made nuclear vessels.
Since the AUKUS pact was unveiled last Wednesday, France, outraged by the abrupt move without notice, has accused Australia and the U.S. of “lying, duplicity,amajor breach of trust and contempt” and recalled its ambassadors to the two countries on Friday.
Macron and Biden will meet in Europe at the end of October “in order to reach shared understandings and maintain momentum in this process,” the joint statement said.
Meanwhile, Biden reaffirmed “the strategic importance of French and European engagement in the Indo-Pacific region”, according to the joint statement.
Dismayed by the “unacceptable” act by the U.S., European leaders in recent days have voiced concerns about the AUKUS agreement and demanded an explanation from Biden on why he misled France and other European partners in forging the new strategic agreement in the Indo-Pacific region. ■
1-French President Emmanuel Macron addresses the press at the nine Mediterranean European Union member states (EUMED 9) Summit in Athens, Greece, on Sept. 17, 2021. (Xinhua/Marios Lolos)
2-U.S. President Joe Biden speaks duringaceremony celebrating the 31st anniversary of the Americans with Disabilities Act (ADA) at the White House in Washington, D.C., the United States, on July 26, 2021. (Photo by Ting Shen/Xinhua)